५४ जनाको जम्बो टोलीसहित प्रधानमन्त्री ओली भारत प्रस्थान – Everest Times News
५४ जनाको जम्बो टोलीसहित प्रधानमन्त्री ओली भारत प्रस्थान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको ३ दिने भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।
नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार बिहान ९ बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।
टोलीमा को को?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृका यादव प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली चैत २२ र २३ गते अजरबैजानमा असंलग्न राष्ट्रहरुको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदै छन्। उनी त्यतैबाट दिल्ली पुग्ने छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी, परराष्ट्र मन्त्रालयका चिफ अफ प्रोटोकल दीपक अधिकारी, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भ्रमण टोलीमा सहभागी हुने छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न दलका ९ सांसद पनि भारत जाने छन्। सांसदहरु दिनानाथ शर्मा, शरदसिंह भण्डारी, रामेश्वर यादव, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, सीताराम महतो, उमा रेग्मी, गणेशसिंह ठगुन्ना, रामवीर मानन्धर र शान्ता चौधरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा सहभागी हुने छन् ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालसमेत प्रधानमन्त्रीसँगै भारत जाने छन्। प्रधानमन्त्री निकट परराष्ट्रविद् तथा नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्य डा. राजन भट्टराई पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीमा समावेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, इच्छाराज तामाङलगायतका व्यवसायीहरु समेत भारत जाने छन् । प्रधानमन्त्रीसँग उनकी पत्नी राधिका शाक्यसँगै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा अधिकारीहरु समेत नेपाली प्रतिनिधि मण्डल टोलीमा सहभागी हुने छन् ।
यता चलचित्र क्षेत्रबाट नायक राजेश हमाल र चलचित्र निर्देशक दिनेश डिसी पनि टोलीमा सहभागी हुनेछन् ।
मनार्थ पिएचडी उपाधि
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मानार्थ पीएचडीको उपाधिसमेत पाउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा उत्तराखण्डस्थित पन्तनगरमा रहेको गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविद्यालयबाट पीएचडीको उपाधि पाउने छन् ।
भ्रमणका क्रममा २५ गते आइतबार विश्वाविद्यालयमा हुने दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘डाक्टर’ मानार्थ उपाधि दिइने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
–भारतीय सेनाले उच्च सैनिक गार्ड आफ अनर दिने ।